राजेन्द्र शाक्य | गृहपृष्ठ
Home स्वास्थ्य र जीवनशैली राजेन्द्र शाक्य
अध्यक्ष, गुण ग्रूप
हामीले लक्षित ग्राहक भनेर निर्धारण त गरेका छैनौं । तर, अपार्टमेण्टको अवस्थितिले व्यावसायिक संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि यो उपयुक्त हुन सक्छ । व्यस्त जीवनशैलीका कारण बस्नका लागि टाढा जानुपर्ने समस्या अपार्टमेण्टहरूले समाधान गर्छन् ।
अपार्टमेण्ट विक्रीका लागि तयारी अवस्थामा छन्
गुण कोलोनी कस्तो परियोजना हो ?
सुपथ मूल्यमा व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र आकर्षक घरको चाहना गर्ने मानिसका लागि लक्षित गरेर गुण कोलोनीको निर्माण गरिएको हो । हुन त यसअघि पनि हामीले सिनामङ्गल र बुद्धनगरमा अपार्टमेण्टहरू निर्माण गरिसकेका छौं । यी अपार्टमेण्टहरू पूर्णरूपमा विक्री भइसकेका छन् । जसरी गुण ग्रूपले नेपालमै पहिलोपटक अपार्टमेण्टको निर्माण गरेर विशिष्ट परिचय बनाएको छ, हामी यसैलाई निरन्तरता दिने क्रममा छौं । ग्राहकहरूको चाहना र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर लाजिम्पाट र पानीपोखरीमा गुण कोलोनीको निर्माण गरेका हौं । विशेषज्ञ इञ्जिनीयरको समूह र घर निर्माणको मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर अपार्टमेण्टहरू निर्माण गरिएको छ । ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर अपार्टमेण्टको खरीदमा विशेष छूटको पनि व्यवस्था गरेका छौं ।
काठमाडौंका प्रायः हाउजिङ मुख्य बस्तीभन्दा टाढा बनाएको पाइन्छ । तर, तपाईंहरूले लाजिम्पाट र पानीपोखरी नै छनोट गर्नुको कारण के हो ?
लाजिम्पाट तथा पानीपोखरी काठमाडौंको केन्द्रमा रहेका छन् । यहाँबाट काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा पुग्नका लागि सहज यातायातको सुविधा पनि छ । यसबाहेक मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरू पनि यसैको आसपासमा रहेका छन् । तर, यसो भन्दैमा अपार्टमेण्ट निर्माण भएका ठाउँहरू अव्यवस्थित छन् भन्ने होइन । हाम्रा अपार्टमेण्टहरू मुख्य सडकबाट केही भित्र छन् । त्यसकारण यहाँ कोलाहल हुँदैन । निर्माण क्षेत्रमा रहेको खाली जग्गालाई पनि भरपुर प्रयोग गर्न बगैंचाको निर्माण गरेका छौं । यसबाहेक यी अपार्टमेण्टमा सामुदायिक वातावरण पनि छ ।
अहिले परियोजनाको प्रक्रिया कहा पुगेको छ ?
गुण कोलोनीअन्तर्गतका सबै निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले हामी अपार्टमेण्ट विक्रीको क्रममा छौं । कतिपय फ्ल्याट विक्री भएर मानिसहरू बसिरहेका छन् ।
तपाईंहरूका लक्षित ग्राहक को हुन् ?
गुण कोलोनीको विशेषता के हो ?
गुण कोलोनी गुण ग्रूपअन्तर्गत सञ्चालित परियोजना हो । एउटा घरका लागि आवश्यक सबै सुविधा यहाँ उपलब्ध छन् । यसबाहेक स्वीमिङ पूल, कम्युनिटी हल, पर्याप्त पार्किङको सुविधा पनि अपार्टमेण्टमा छन् । यहाँ बस्ने मानिसहरूले पूर्णतः पारिवारिक वातावरण पाउनु यहाँको अर्को विशेषता हो ।